ကြောင်ကြီးနှင့် သူ၏ လျှံသူမြှား အပိုင်း – 1 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြောင်ကြီးနှင့် သူ၏ လျှံသူမြှား အပိုင်း – 1
ကြောင်ကြီးနှင့် သူ၏ လျှံသူမြှား အပိုင်း – 1
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 15, 2015 in Aha! Jokes, Satire |7comments
ဆရာဦးကြောင်ကြီး အင်တာနတ် တက်ရင်း သူ့ဘဝသူ တြားရသည်။ ဩော်လူရယ်လို့ ဖြစ်လာဒေါ့ ခြစ်သူ၊ မုန်းသူ အစုံတွေ့တယ်၊ မခြစ်ချဉ်လို့လှည်းမြ၊ မမုန်းချဉ်ဗေမှည့်လဲမုန်းရ… ဘဝဆိုဒါ ချိုလိုက် ချဉ်လိုက်နဲ့ ချိုချဉ်ဂျီးပါဒဂါး..။ သူ၏ ဆိတ်အစဉ်မှာ မွတ်ဂဇတ်ရွာ စာတဗုဒ် ဖတ်နေလျှာမှ အတိတ်သို့ ပြန်ပြောင်းရောက်ရှိသွားသည်။.. တီနောင် တီနောင် တီနောင်…။
အတွေးစဉ် အမျှဉ်တန်း အတိတ်ဆီ လှမ်းမိပါရဲ့..
လွမ်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် တခုခွဲလောက်က ဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ဦးကြောင်ကြီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ လုပ်နေသည်၊ ကားရိုက်နားချိန် ကြော်ငြာများလည်း ရိုက်ကူးလာဘ်ခံအိ။ တနေ့ဒွင် ကွန်ပြူ တာသင်တန်း ကြော်ငြာရိုက်ကူးပေးရလေသည်။ ပထမတရက် အကြို ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပဏာမရိုက်ကူးမှု ပြုလုပ်၏။ ကင်မရာမင်းမှာ မောင်ဂီ.. မြေအောက် အပြာကားလောကတွင်ဒေါ့ နူးဘာဂီဟု လူသိများသည်။ ဒင်းအား ရဲဖမ်းမည့်ဆဲဆဲ ရဲအုပ်လျှာမြအား မောင်ဂီလာဘ်ရာ အပြာကားဆယ်ကား လာဘ်ထိုး၍ အနားခေါ် ကယ်ဆယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (အီဃါး စကားချပ်။။ )
တောက်စ် မောင်ဂီလျှာ မင်းကို ခိုင်းလိုက် သောက်တလွဲ ချည်းပဲ။ ခုချက်ခြင်း အစားထိုးလျှာ.. ဘာသောက် ဆင်ခြေမှ မပေးနဲ့.. နက်ဖြန် ငှာလိုခြင်ဒယ်.. ခုလျှာ.. ဒါရိုက်တာကြောင်ကြီး ဆူပူသောင်းကျန်းနေသည်။ အကြောင်းမူကား ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှတစ် ဆိုသလို ကြော်ငြာအပြီးသတ်မည့် နက်ဖြန်အတွက် သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်လ်ဂဲသာဂူး ဗျုန်းဆားဂျီး လင်ယူသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူယူသည်က စစ်အင်ဂျင်နီလျှာတပ် လမ်းတံတားဗိုလ်ကြီးဖြစ်သည်။ ကိုကို ဆူလိမ့်မယ်.. သူက အဲလို ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် ကြိုက်ပါဘူးဆို။ ခုတောင် ကိုကိုဖောက်မည့် ကတ္တရာလမ်းအောက်ခံဖို့ ဝါးလုံးလာဝယ်ရင်း တွေ့တာ။ နို့မို့ဆို အပြင်တောင် ပေးမထွက်ဘူး။ သာဂူးကား ဗိုလ်ဂဒေါ်ဖြစ်၍ ဆိတ်ပြောင်းသွားလေပြီ။။။
သူဒေါ်ဂေါင်း နတ်ကောင်းမ ဆိုသလို ဂေါင်းဖြစ်မည့် မောင်ဂီ ကံကောင်းချဉ်ဒေါ့.. သူ့ဖုန်းကံအလျောက် ပြသနာ ပြေလည်သွားသည်။ လူစား လျှာမြ၍ ခေါင်းမီးတောက်နေခိုက် သင်တန်းကျောင်းတွင်ပင် Emerald ဆိုသည့် ကွန်ပြူ တာဆြာမလေးအား အမှတ်မထင် တွေ့တော့သည်။ ဗျာ.. အမ်မရယ်.. ဟုတ်လား.. ဗျာ အမရယ်.. အမရာပဲ ကြားဖူးတယ်။။ ဟုတ်ဖူးရှဉ့်.. အမ်မရယ်.. မြန်မာလို အဖိုးတန် မြရတနာကို ပြောတာ..။ ဆြာမလေး လွန်စွာဆိတ်စိုးသွားသဖြင့် မနည်းတောင်းပန်ရလေသည်။ ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ပါခမြာ.. မြန်မာလိုပဲ ခေါ်ခွင့်ပြု ပါ..။ ဆရာမြ.. ဘာရှဉ့်.. မှားလို့ ဟို ဟို .. ဆရာမမြ..။ အပမ်းမကြီးလျင် တခုလောက် ကူညီပါ။ မနက်ဖြန် ရိုက်ကွက်အတွက် ဆြာမ ကူညီသရုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလား။။ လှုပ်ပါဆြာမရယ်.. ဆရာမလို ပညာတတ် အချောအလှကို ခုလို တောင်းဆိုရတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ် ကူညီလျှာလည်း ရောက်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းဟန်ဆောင် ဆူထားသော ဆြာမြရင်ထဲ ဖျားပွဲလှည့်နေပြီ.. ဟီဟိ ငါတော့ ဖုတ်သွင်းရထား ဆိုက်တာပဲ။ မင်းတမီး ဖြစ်တော့မယ်.. ငါကွ။။ အင်းလေ ရှင်တို့ ဒုက္ခမကြည့်ရက်လို့ ပြီးတော့ ကျောင်းအတွက်လည်းမို့ ကူညီပါ့မည်။ ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆြာမရယ်.. ဒါဆို နက်ဖြန်မနက် ကိုးနာရီ သင်တန်းခန်းမမှာ ဆုံရအောင်နော်။ ဆြာမ အဆင်ပြေသလိုသာ ဝတ်စားလာခဲ့ပါ။ နဂို လှပြီးသားမို့ ဘာဝတ်ဝတ် လှပါတယ်…။ အိမ်အပျံ ညနေတွင်တော့ ခြေထောက်နင့်မြေ ထိသိမထင်ဒေါ့။ ညတွင်းခြင်း မာမီဖြိုးထံ ဖုန်းဆက်.. မနက်အစောဂျီး အပွိုင့်မန့်ယူ.. တညလုံး အိပ်မပျော်။ မိုးလင်းတော့ ကိုကို အင်္ဂလှံမှ ပို့လိုက်သော မဝတ်ရသေးသည့် ပွဲတက်ဂါဝံကိုဝတ်.. ဖြိုးထံသွား.. ဆိတ်တိုင်းကြ အလှပြင်လေသည်။ ကုန်ခြင်သလောက် ကုန်ပလေ့စေ…။ ပိုက်ဆံဆိုတာ သုံးဓါတ်လျင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု….။
ရိုက်ကွင်းတွင် ဘေးမှ ဝိုင်းကြည့်သူများ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေသည်။ ထိုအထဲ ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်နေသူမှာ အာတီဒုံ နှင့် လေမားမား ဂိုဏ်းတူ ညီအမနှစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဆြာမြကို သူတို့ ဆယ်တန်းတွင် အနိုင်ယူကာ ဆေးနှင့်စက်မှု သို့ရောက်သွားကြသည်။ ဆြာမြကလည်း ခေသူမဟုတ်။ အီကိုသို့ရောက်အိ… သို့သော်ဒင်းတို့ကတွေ့လျင် မြရယ် ဆေးကျောင်းစာဖတ်ရတာ ပင်ပန်းလိုက်တာ.. တော်ယုန်ညဏ်နဲ့ဆို ဂေါက်သွားနိုင်တယ်ဟု ငြီးကြွားကြွားသူကကြွား…၊ မြရယ် အာရ်အိုင်တီမှာ မ်ိန်းခလေးဝံခွင့်ကို ယောက်ျားလေးထက် မြင့်ထားလို့သာ လျောက်လိုက်တာ၊ ဆေးကျောင်းမှာလို မိန်းခေးအခန်းဖော်သိပ်မရှိဘူးရယ်.. ဟု ငါးမြွေထိုးလေးဖြင့် ထိုးသူကထိုး..။ ဆြာမြမှာ လှိမ့်ပိမ့်ခံရင်း အီကိုကျောင်းပြီးတာတောင် နာကျည်းချက်ဖြင့် ကွန်ပြူ တာ ဆက်လေ့လာမိသည်တွင် ဘွဲ့ဒစ်ပလိုမာ များစွာရကာ ဆြာတဆူ ဖြစ်ခြေပီ။ ဆိတ်နာလွမ်း၍ အိမ်ဧည့်ခန်းနံရံ ခန်းလုံးပြည့် ဘွဲ့လက်မှက်အားလုံး တန်းဆီချိတ်သည်။ သိမ်ဖြူ လမ်းရှိ ဘီအက်စီကောလိပ်မှ ရသော အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ လက်နှိပ်စက် လက်မှတ်ပင် မခြံ။။။
အင်း..ဒီတချီတော့ ဒင်းတို့အလှည့်.. ငါဘာကောင်လည်း တွေ့ပြီမှတ်လား။ အာတီဒုံနှင့်လေမားမားကား မီးဝင်းဝင်းတောက်သော မျက်နှာဖြင့် လူအုပ်ထဲမှ အံတကြိတ်ကြိတ် တောက်တခေါက်ခေါက် ဖြစ်နေသည်။ အခြစ်ဆုံး သယ်ရင်း ခေါင်းမာလွန်း၍ ခြစ်စနိုးခေါ်သော တဖက်ပိတ်မဲသွပ်ကား ဒရင်းဘက်၊ခေါင်းအုံးနှင့် လဖက်ပွဲပါယူလာကာ အားပေးသည်။ သူ့နာမည်ရင်းက ဟီလီနီ Helene သို့သော်ထိုအချိန်က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုနှင့် အန်အယ်လ်ဒီအား စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အမည်တပ် မြေလှံချေမှုန်း ချိန်မို့.. သူ့နာမည်ရင်းလှမ်းခေါ်တောင် မကြားချင်ယောင်ဆောင်သည်။ ယနေ့ချိန်လို ဒေါ်စု လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လျှံ ရေပန်းစားနေချိန်မျိုး မှာဒေါ့ ဒင်း မည်သို့ရှိမည် မပြောဓါတ်။။။။
မရိုက်ခင် ကင်မရာ အနေအထား.. ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက် ရှင်းပြသည်။ ကိုယ်ကို တောင့်မထား ချုပ်မထားရန်။ နဂိုအတိုင်း သက်တောင့်သက်သာ နေရန်၊ စိတ်လျှော့ထားယံ…။ ဒါတွေကို ဆြာမြ နားဝမံ… ဟီဟိ ငါတော့ မင်းတမီးဖြစ်ပီ၊ ထက်ထက်မိုးအူးလို ဖြစ်တော့မည်။ ဟိုကောင်မတွေ ငါကို မနာလိုဖြစ်နေကြပီ။။ ငါကွ…။
ကဲ ရိုက်မယ်…။ ဆြာမ.. လာ ကွန်ပြူ တာရှေ့ထိုင်…။ ဟင့် ငါက မတ်တပ်ရပ် သရုပ်ဆောင်ရမည် မှတ်တာ.. ထိုင်ဆိုတော့လည်း ထိုင်ရတာပေါ့လေ။ ဘယ်လာဘ်က ကီးဘုတ်ပေါ် တင်ထား.. ဟုတ်ပီ.. ညာလာဘ်က မောက်စ်ကို ရွှေ့ပေးနေ…။ ကိုယ်ကို ငြိမ်ထား.. ။ ဆလိုက်မီးများ ဝင်းထိန်လာသည်၊ လာဘ်နှစ်ဖက်အနီး ကင်မရာ ရောက်လာသည်။ ဘာမှ မပြောနိုင်ခင် တဖြတ်ဖြတ်နှင့် ရုပ်ရှင်၊ရုပ်သေများ ရိုက်ရင်း ရှုတင် ပြီးဆုံးသွားသည်။ ဟင်.. ရှင် ရှင် လူပါးဝလှချည့်လား.. ကျမကို ကြောယုန်ကြံသလား။ ခမြှာ.. ကျနော် ဘာမှားသွားလို့လဲ။ ဆိတ်ထိန်းပါဆြာမ.. ရော့ရော့ ရေခဲရေသောက်လိုက်..။ မိန်းခလေးလက် အနီးကပ်ရိုက်ခြင်တာ ခုမှ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါရိုက်တာကြောင်ကြီး အတော်ပင် စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားရသည်။ အစောဂဒင် အကောင်းကျီး… ဩော်မိန်းမ မိန်းမ.. နားလည်ရ တယ်ခက်ပါလား။
ဇာတ်လမ်းချုပ်တော့ ဆြာမြ ငယ်သူငယ်ခြင်း ညီအမနှစ်ဦးမှ သူရို့ဘော်ဒါအား ပညာပြသည်ဆိုဂါ ကြောင်ကြီးအား မုန်းသွားသည်။ (အမှန်ဒေါ့ ဆြာမြ မင်းတမီးဖြစ်သွားလျင်လည်း ကြောင်ကြီးအား မုန်းဂျမြည်သာတီး။။ ) တဖက်ပိတ်မဲသွပ်မှာလည်း ရိုက်ကွင်း ခဏနှင့် ပီးသဖြင့် ဘာစက်လုပ်ရမှန်းမသိ… နောက်ဆုံး ယူလာသည့် ဒရင်းဘက်နှင့်လဖက်အုပ် ခေါင်းပေါ်ရွက် အိမ်ပြန်သည်တွင် လမ်းတလျောက် အိမ်များမှ အဝတ်ဟောင်းနှင့် လဲသည်မှတ်၍ လှမ်းခေါ်ကြသည်တွင် သူပါ ကြားမှ မဆီမဆိုင် ဦးကြောင်ကြီးအား ရန်သူအဖြစ် အငြိုးထားဒေါ့သည်။ ဆြာမြကတော့ ပြောမနေနှင့်တော့ မည်မျှမုန်းသနီးဆို သူ သက်သတ်လွတ် စားသည့်နေ့ပင်လျင် ကြောင်လျှာသီးစား၍ လာဘ်စားချေသီ။ ဟေ့ ငကြောင်ကြီး ကမ္ဘာကြေတာတောင် နင့်ကို မကြေဗူးမှတ်….။
ဤကား ပညာရှိသုခမိန် နိုင်ငံပြု ဆရာဦးကြောင်ကြီး ဗွဒကွေ့တွင် ကြုံတွေ့ရသည့် လျှံသူမြှားအကြောင်းပေတီး…
စိတ်ဆိုးရအခက် ရီရအခက်နဲ့ ဒီ ကြောင် တော့ ။
မကြိုက်တာတွေ ကိုပြော နေကြရင်လဲ သူတို့ပြောတာတွေကို ဆန်းစစ်ဝေဖန် တဲ့သဘောနဲ့ နားထောင် ကြည့်ကြရအောင်။
ကိုယ်နဲ့သဘောတူ တဲ့ လူတွေပြောတာတွေ ကိုပဲနားထောင် ကြမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အစွဲကို သာ ဘက်လိုက်ရာ (confirmation bias) ရောက်ပေမည်။
ဒီမိုကရေစီ နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် ရှိကြကြေး ဆိုရင် သောက်တလွဲတွေကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် (freedom of stupid speech) လဲ ရှိရမှာပေါ့။
(ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို ဘာပြောလို့ ဘာတွေ ဖြစ်လဲ)
(ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ရင်လဲ မနာကြေး မို့ ပြုံးပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။ လက် ကလေး ကို တော့ လှ အောင် ရိုက်ပေးပါ)
ကြောက်ကို အမွှေးနှုတ် ဖင်တံစို့ထိုးကာ မီးကင်စားချင်အိ။
စကားမစပ်မဲစာရင်းလေးတွေစစ်ကြပါ မှားရင်ပြင်ကြပါနော်။
​အော်​ ကို​ကျောင်​ဂျီး ကို​ကျောင်​ဂျီး ယန်​သူ ၀ိုင်းဝိုင်းလယ်​​နေတာ​တောင်​အပျုံးမပြက်​
-နောင် ရှက် မှတ်